Shina Mavesatra entona mpamokatra tetikasa sy mpamatsy | Vondrona mahazatra
Ny firafitra vy mavesatra dia endrika fananganana matevina sy lafo vidy izay azo ampiasaina amin'ny saika rehetra karazana fananganana, toy ny tranobe indostria mavesatra, rafitra fanohanana ny fitaovana, foto-drafitrasa, trano sy tranobe misy rihana. Noho ny haavo avo lenta amin'ny vy, azo itokisana io karazana vy vy io. Araka ny zavatra takinao, ny firafitra mavesatra adidy mavesatra dia azo amboarina amin'ny habeny sy endrika iray mifanentana amin'ny zavatra voafaritry ny tetik'asa.
tetik'asa mavesatra matevina
Manolotra rafi-by matevina isan-karazany izahay, mba hanomezana ireo mpanjifa isan-karazany, toy ny fananganana spira vy tokana, rafitra roan-droa avo roa heny ary rafitry ny vy marobe. Ny fitenenana manokana, ny firafitry ny vy tokana dia misy andalana roa andalana, ary ny firafitra vy matevina avo roa matetika dia mandrafitra tsipika telo vy. Ankoatr'izay, ny seho overhead crane dia mandeha miorina amin'ny fampiasana manokana anao.
Ho fanampin'ny rafitra matevina mavesatra, manana rafi-by maivana izahay hisafidianana anao. Mifandraisa aminay ankehitriny haka ny vahaolana vita amin'ny vy vy mety indrindra.
Previous: Ny trano fanamboarana trano vita amin'ny vatosoa Prefab
Manaraka: Rindran-tsoratry ny tranokala vy vita amin'ny marindrano marobe